नयाँ सिल्क रोड: चीन र भारतका स्वार्थबीच नेपाल कहाँ ? – Online BBC
भारत र चीनबीच बाइलेटरल सम्बन्ध छ । राजनैतिक दृष्टिले हेर्दा भारत सुरक्षाबाट विकासतिर जान खोज्छ भने चीन सुरक्षाबाट लम्कने देखिन्छ । यसभित्र आर्थिक र सुरक्षाका डाइमेन्सन छन् यी दुईबीचको सम्बन्ध दक्षिण एसियामा असमान प्रतिस्पर्धा छ । सन् १९५० ताका दुवै राष्ट्र भाइ – भाइ भन्थे, १९६० तिर आउदा बाइ-बाइ भए भने सन् १९९० को दशकतिर आपसी सम्बन्धले BUY – BUY भएको देखिन्छ । बोर्डरको झगडा, स्रोत र साधनमा प्रतिस्पर्दा र क्षेत्रीय प्रभुत्वको बल मिचाई छ भने ग्लोबल गभर्नान्स, ब्रिक्स र AIIB मा सम्बन्ध छ ।
प्रोफेसर हु सीसहेंग भन्नुहुन्छ, ‘कोल्ड वारको अन्ततिर, अमेरिकी – पश्चिमाहरुले नेतृत्व गरेको आर्थिक ग्लोबलाइजेशनको फाइदा लिन नेपाल चुकेको देखिन्छ ।
अब यो चीनले नेतृत्व लिएको आर्थिक ग्लोबलाइजेशनको ड्राइभिंग फोर्स – ओबरबाट फाइदा लिन नेपाल चुक्यो भने त लाजमर्नु नै हुनेछ । ओबरले कायाकल्प परिवर्तन गर्नेछ भन्ने सोच छ । के देखिँदै आयो भने कुटनैतिक क्षेत्रमा यसले धेरै मुलुकलाई सोच्न बाध्य पारेको अवस्था छ ।
Prevदेखाउलान् त ओलीले जादुको छडी ?
Nextअबको विकास कागजमा होइन जनताको जीवनस्तरमा देखिन्छः प्रधानमन्त्री